Juventus oo indhaha ku haysa saxiixa labo xiddig oo ka tirsan Kooxda Bayern Munich - Barwaaqo TV - Warbaahinta Bulshada Horumarkeeda
Juventus oo indhaha ku haysa saxiixa labo xiddig oo ka tirsan Kooxda Bayern Munich
By admin January 25, 2021 70
(Turin) 25 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa la soo warinayaa inay indhaha la raacayso saxiixa labo ka mid ah xiddigaha Bayern Munich.
Warsidaha Calciomercato ayaa warinaya in Juventus ay tixgelinayso inay u dhaqaaqso soo xero-gelinta labada ciyaaryahan ee ka tirsan Kooxda Bayern Munich ee kala ah Joshua Zirkzee iyo Corentin Tolisso.
Juventus ayaa doonaysa inay la soo saxiixato weeraryahan bishaan, waxaana ay diiraddeeda u weecisay Zirkzee, kaasoo doonaya laftiisu inuu helo boos joogto ah, waxaana lagu heli karaa heshiis amaah ah.
Bianconeri ayaa sidoo kale xiiseynaysa xiddiga khadka dhexe ee reer France, Tolisso, kaasoo ay aad u xiiseynayeen saxiixiisa ka hor inta uusan ku biirin Bayern Munich sanadkii 2017, sidoo kalena loo ogolaan karo bishaan inuu ka tago kooxda Bavarian-ka.
Dawladda iyo hay’adda WFP oo ka wada hadlay qorshaha hay’ada ee 4-ta sano ee soo socota
Zlatan oo soo bandhigay Sawirkaan idiin muuqda… (Miyuu Ibrahimovic Madaxa soo xiirtay!?)
L’Equipe oo daaha ka rogtay mushaharka uu Lionel Messi ka qaadan doono naadiga Paris Saint-Germain haddii uu si rasmi ah ugu biiro
Dowladda Ingiriiska iyo UEFA oo maanta kulan ku balansan…(Maxaa loogaga hadlayaa?)
Sidee ayuu Dani Alves ugu dabaal dagay kusoo laabashadiisa Barcelona?